कला Archives - Page 8 of 10 - न्यूज सञ्जाल
निर्माण व्यवसायी आन्दोलित, प्रशासनमा ज्ञापनपत्र
‘हर जनम मे मिलेंगे’मा जाजरकोटकी सिजन मुख्य अभिनेत्री
न्यूज सञ्जाल २४ बैशाख २०७६, मंगलवार १४:३४
काठमाडौं । बलिउडमा जाजरकोटे चेली भेरी नगरपालिका– ३, पीपलडाँडाकी २१ वर्षीय सिजन पुनले बलिउडकी मुख्य अभिनेत्री बन्ने अवसर पाएकी छिन् । अभिनेत्री सिजनको ‘हर जनम मे मिलेंगे’ बलिउड चलचित्रको हाल धमाधम छायांकन भइरहेको छ । चलचित्र पी भन्साली प्रोडक्सन हाउसले निर्माण गरेको ...
‘यथार्थ अन्धविश्वासको’ वृत्तचित्रको शुभमूहर्त
न्यूज सञ्जाल २२ बैशाख २०७६, आईतवार १८:२८
अर्जुनधारा । पूर्वेली कलाकार संघको दोस्रो प्रस्तुति र झापाको बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी हस्पिटलको विशेष सहयोगमा “यथार्थ अन्धविश्वासको” वृत्तचित्र निर्माण हुने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसंगति र अन्धविश्वासलाई उजागर गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको उक्त वृत्तचित्रको आइतबार झापाको चारआलीस्थित ...
आजबाट चलचित्र ‘दालभात तरकारी’ प्रदर्शनमा
न्यूज सञ्जाल २० बैशाख २०७६, शुक्रबार ०८:०५
झापा । फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत आज शुक्रबारबाट चलचित्र ‘दालभात तरकारी’ प्रदर्शनमा आएको छ । चलचित्रलाई यस वर्षकै प्रतिक्षित चलचित्रका रुपमा हेरिएको छ । चलचित्रले मल्टिप्लेक्समा सर्वाधिक २४ शो पाएको छ । सार्वाधिक शो पाएर खुशी भएको चलचित्र युनिटले दर्शकलाई सहज ...
न्यूज सञ्जाल २ बैशाख २०७६, सोमबार १४:२९
असोज १४ गते फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक, गीतकार तथा साहित्यकार गगन श्रेष्ठ (विरही) को ६१ वर्षको उमेरमा निधन भयो। अचानक स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएका उनी २ वर्षअघि कलेजोमा समस्या भएपछि स्वास्थ्य उपचारपश्चात् सामान्य भई घर फर्केका थिए। ...
शनिश्चरेमा म्युजिकल शो सम्पन्न
न्यूज सञ्जाल १ बैशाख २०७६, आईतवार १८:२२
शनिश्चरे । वेग स्टेट डान्स सेन्टर अर्जुनधारा ७ मिलडाँडाले नयाँ वर्ष २०७६ को उपलक्ष्यमा आइतबार शनिश्चरे बजारमा वेग स्टेट म्युजिकल शो सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार रानाको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा सेन्टरका कलाकारहरुले करिब चार ...
न्यूज सञ्जाल २७ चैत्र २०७५, बुधबार ०९:२८
काठमाडौँ । मिस नेपाल २०१९ का लागि लिइएको अडिशनका क्रममा एक किशोरीप्रति निर्णायकमण्डलकी एक सदस्यले गरेको व्यवहारलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना र चर्चा भएको छ । ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा भाइरल भएको एउटा भिडिओमा निर्णायकमण्डलकी सदस्यले रुखो शैलीमा ती किशोरीलाई ...
न्यूज सञ्जाल २४ चैत्र २०७५, आईतवार १०:३७
काठमाडौं । दस सेकेन्डको एक चुम्बनको क्रममा करिब आठ करोड जीवाणु चुम्बन गर्नेको मुखमा प्रवेश गर्ने गरेको निष्कर्ष नेदरल्यान्ड्सका वैज्ञानिकको एक दलले निकालेको छ । वैज्ञानिकहरूले १७ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहको २१ जोडीको चुम्बन प्रक्रियाको अध्ययन गरेका थिए । ...
मेरो एउटा साथी छ
न्यूज सञ्जाल २० चैत्र २०७५, बुधबार १२:३८
आ–आफ्ना सपना सिउरेर हिँडेका मानिस आपसमा कसरी एउटै वृत्तमा घुम्न थाल्छन् ? उनीहरूबीच कसरी गाँसिन्छ सम्बन्ध ? अलग दिशा, फरक मोड र भिन्न गोरेटो तय गरेर आएका पृथक् व्यक्तिका सपना कसरी विपनाको आँगनमा स्नेहले सँगै मिसिन्छन् ? सबै अचानक, सबै ...
अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र अमेरिकी गायक निक जोनस बैबाहिक जीवनमा बाँधिएको चार महिना नवित्दै डिभोर्सको तयारीमा रहेको खबर बाहिरिएको छ । एकअर्कासँग खुसी नरहेको र दाम्पति डिभोर्सका लागि अगाडि बढेको अमेरिकाको ओके म्यागजिनले बताएको छ । ३६ वर्षिय प्रियंका र ...
काठमाडौँ। यही चैत २३ गते हुने भनिएको चलचित्र कलाकार संघको महाधिवेशन फर्जी सदस्यता वितरण गरेको उजुरी परेपछि स्थगित भएको छ । कलाकार सुरज आरडीले वर्तमान कार्यसमितिले गैर कलाकारलाई नयाँ सदस्यता वितरण गरेको भन्दै केही दिन अगाडि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ...
२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार १९:३७